अध्यक्षका प्रत्यासी रोहन गुरुङको उदघोष : हामीले गफ होइन, काम गर्नका लागि नेतृत्व लिन चाहेका हौं - Deshko News Deshko News अध्यक्षका प्रत्यासी रोहन गुरुङको उदघोष : हामीले गफ होइन, काम गर्नका लागि नेतृत्व लिन चाहेका हौं - Deshko News
अध्यक्षका प्रत्यासी रोहन गुरुङको उदघोष : हामीले गफ होइन, काम गर्नका लागि नेतृत्व लिन चाहेका हौं
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २५ औँ साधारणसभा आउन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ । चुनावको दिन आउनै लाग्दा यतिबेला व्यवसायीहरु मतदाता आकर्षित गर्दै आ–आफ्नो चुनावी प्रचार अभियानमा व्यस्थ बनेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई साँच्चीकै मुलुकको आर्थिक उन्नतीसँग जोडन चाहने प्रगतिशिल व्यवसायीहरुले संयुक्त प्यानल बनाएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाएका छन ।
एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट गणतान्त्रिकम मञ्चले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकाका वर्तमान महासचिव रोहन गुरुङको नेतृत्वमा प्यानल नै बनाएको हो ।
संयुक्त व्यावसायिक समूहमा प्रगतिशील र राष्ट्रवादी व्यवसायीहरु आवद्ध रहेका छन । व्यवसायीहरुको आकर्षण रहेको गुरुङ समुहमा सवै उम्मेदवार निकै गहकिलो ओजका रहेका छन ।
चुनावी प्रचारको क्रममा गुरुङसहित उनको समूहमा रहेका १७ जना उम्मेदवारको बिचार र प्रतिवद्धताले सवै ब्यवसायीको मन जितेको अनुभुति पनि गरेका छन ।
विमल ढकालले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक फोरमका उम्मेदवार आ–आफूलाई मात्रै भोट माग्दै हिडिरहेका बेला ‘संयुक्त व्यवसायिक समूह’ का सबै उम्मेदवारले व्यक्ति होइन, समूहलाई जिताउन आग्रह गरेकाले पनि सो समूह जितको नजिक पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान कार्यसमितका अध्यक्ष समेत रहेका ढकाललाई व्यवसायीको हक–हितमा भन्दा पनि आफ्नो हितमा बढी काम गरेको, व्यवसायलाई भन्दा कांग्रेस पार्टीको झण्डालाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् ।
‘संयुक्त व्यवसायिक समूह’ का उम्मेदवारले के–कस्ता प्रतिबद्धता अघि सारेका छन ? योजनाहरु के–कस्ता छन ? अध्यक्षका उम्मेदवार रोहन गुरुङको भनाई उहाँकै शब्दमा ।
निर्वाचनको मिति आउन अझै केही दिन बाँकी छ, तर यसअघि नै हाम्रो जितको सुुनिश्चितता भएको छ । चुनावको मिति नजिक–नजिक आउँदा दुबै समूहका चुनावी घोषणापत्र व्यवसायीका हात–हातमा पुगेका छन ।
हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने प्रष्ट योजनासहितको घोषणापत्र व्यवसायीका हात–हातमा पुर्याएका छौं । हाम्रो दुई वर्षे कार्यकालमा के–कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई पनि हामीले घोषणापत्रमा प्रष्टै उल्लेख गरेका छौं ।
हामी गफ होइन, काम गर्नका लागि नेतृत्व लिन लागेका हौं । म दुई वर्षे कार्यकाल विताएर फेरि अर्को एक कार्यकाल काम गर्छु भन्दै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका विमल ढकाललाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
तपाईले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा के–के काम गर्नुभयो ? ‘फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको विषय केही जटिल विषय हो । त्यसको समाधान त गर्न सक्नुभएन । हामी ठीकै छ भनौला । तर, तपाईले सामान्य भन्दा सामान्य काम पनि गर्न सक्नुभएन ।
अनि कसरी फेरि अध्यक्ष उठ्ने भन्नुहुन्छ ? शाखा कार्यालय खोलौं, एजेण्टको कार्यालयलाई निरुत्साहित गरौं भनेर हामीले धेरै पहला गर्यौं । खोइ त्यसमा तपाईले सामान्य सुधार गर्न सक्नुभयो ? अहं, सक्नुभएन, गर्नै चाहनु भएन ।
घरेलु कामदार कार्यविधि–२०७२ लाई परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउने कुरामा खोइ तपाईको प्रयास र पहल ? २५ हजार धरौटी राख्ने कुराको अन्त्यका लागि तपाईको कार्यकालमा कुनै प्रयाश भयो ?
नेपाल फर्किएका चेलीलाई श्रम स्वीकृति दिने कुरामा खोइ तपाईको पहल ? नियम अनुसार वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन वोर्डलाई सक्रिय बनाएर नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न बोर्डमा रहेको पूँजी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सीप विकास गर्ने, अनि सीप विकास तालिम प्रभावकारी बनाउने कुरामा तपाईको पहल खोइ ?
यी कुनै काम तपाईले गर्नै चाहनु भएन । अव फेरि केका लागि नेतृत्व दिने ? संघलाई समाप्त पार्नका लागि ब्यवसायीले तपाईलाई मत दिने ? यस्तो भुल कुनै पनि ब्यवसायीले गर्नुहुने छैन भन्नेमा म ढुक्क छु ।
फेरि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने उहाँ ( बिमल ढकाल समुह) हरुलाई मेरो आग्रह छ । हामीले यीमध्ये केही कुरा पूरा गरेका छौं । बाँकी कुरालाई पूरा गर्न मेरो नेतृत्व एक पटकका लागि आवश्यक भयो भनेर प्रमाणसहित आउनुहोस् ।
हामी फुलको माला लगाउन तयार छौं । होइन भने व्यवसायीलाई गुमराहमा राख्न पाइन्न, ब्यवसाय धरासाही बनाएर आफू मात्रै बन्ने चक्रब्यूँह रच्न पाइन्न ।
उहाँहरु अहिले पनि आफूले जितेपछि रोजगारदाता मुलुकका एजेण्टसँग रोजगारीका लागि पहल गर्छौं भनेर हाँस्यास्पद कुरा गर्नुहुन्छ ।
उहाँहरुका कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ । हामी त्यहाँका एजेण्टसँग होइन, त्यहाँको सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्छौं । त्यसैले जित उहाँहरुको होइन, हाम्रो हुनुपर्छ भनेका छौँ ।
विमल ढकालले अघिल्लो पटक ‘फ्रि भिषा, फ्रि टिकट’ को व्यवस्था अन्त्य गर्ने कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नुभएको थियो, खोइ त पूरा गर्नुभएको ?
त्यसैले अब गफ गर्ने होइन, काम गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । यो कामको नेतृत्व ‘संयुक्त व्यवसायिक समूह’ले मात्र दिन सक्छ । बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई नै धरासायी पार्न चाहने पुरानै अध्यक्षको नेतृत्वमा यी काम हुन सक्दैन ।